ဝန်ကြီးဌာနများ – ပြင်းရှတဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်ပေါ့
This entry was posted in စိတ်ထဲရှိသမျှ, ဟိုဟိုဒီဒီ and tagged Expectation, funny, Life, negotiation. Bookmark the permalink.
11 thoughts on “၀န်ကြီးဌာနများ”
MrDBA | April 20, 2009 at 8:55 am
စိတ်ကူးကိုတော့ လက်ဖျားခါသွားပြီ။ အံ့ရော။ ကောင်းချက်။
လူပျိုကြီး | April 20, 2009 at 12:06 pm
အောင်မယ်လေး ဥမပါ အလင်္ကာ အဲလေ ဥပမာအလင်္ကာမြောက်ချက်ကတော့ ကုလားကြီး သွားတိုက်ဆေး ကြော်ငြာသလိုပဲ ထင်းထင်းကြီး ဖြစ်နေပါလား။ ခက်တယ်ခက်တယ် ကိုယ်လည်း ဒီအထဲပါနေတော့ ဘာပြောရမှန်းကို မသိပါဘူး။
ကုမ်ရာသီသူ | April 20, 2009 at 12:11 pm
အဟီး၊ အဲဒါ သူငယ်ချင်း ထနောင်း နဲ့ ပေါင်းရေးတာ။ ပျော်ထှာ။ 😀
ကုမ်ရာသီသူ | April 20, 2009 at 12:46 pm
လူပျိုကြီးကလဲ။ အတင်းကြီးကို ၀န်ခံနေတော့တာပဲ။ မိုးပေါ်ထောင်ပစ်လိုက်တာ တည့်တည့်မှန်ရတယ်လို့။ ဆွေဆွေအောင်ရေးနေကျစာလုံးလေး ငှါးပြောလိုက်မယ်။
‘ မည်သူ့ကိုမျှ မရည်ရွယ်ပါ၊ တိုက်ဆိုင်မှုရှိလျှင် ခွင့်လွှတ်ပါ’ ဆိုတာလေ 😛
TZA | April 20, 2009 at 1:55 pm
ဟားဟား.. ရေလည်တွေးတတ်တယ် ကုမ်ကုမ်..
ThihaThit | April 20, 2009 at 3:22 pm
အကယ်ဒမီပေးဖို့ရာ ပြောအုံးမှပါ.. 😛
လင်းကြယ်ဖြူ | April 20, 2009 at 9:02 pm
ကုမ်ရာသီသူ | April 21, 2009 at 3:07 am
ကို TZA >> နာမည်ပေးကင်ပွန်းတပ် တော်ထှာ။ ရှဲ့ရှဲ့။ (ကုန်ကုန်ခမ်းခမ်း- စိတ်) 😀
ကိုသီဟသစ် >> လန်းတယ်လာ့။ မှန်းလိုက်ဦးမယ် လူကြမ်းမင်းသမီး အကယ်ဒမီ 😀
ကိုလင်းကြယ်ဖြူ >> အားပေးသူများကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် (အကယ်ဒမီပေးပွဲမှာ ဆုပိုက်နေသော အိုက်တင်ဖြင့်) 😀
myanmarblogreader | April 21, 2009 at 2:54 pm
ကုမ်ရာသီသူ | April 22, 2009 at 8:15 am
MyanmarBlogReader >> ပျော်ရွှင်ပါစေ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 🙂
barnay | November 3, 2011 at 10:52 am
ပို့စ် အဟောင်းဆိုပေမဲ့ ခုမှ ဒီဆိုဒ်ကို ရောက်လာဖူးတာပါ ..
စေ့စေ့ငုငုရေးတတ်ပါပေတယ် ..း)
နာမည်က ကုမ်ကုမ် တဲ့လားဗျ .. ဟီး ..
ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ ပါစေဗျာ